Maitiro mukutengesa kwepamhepo | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | eCommerce, Zvekutengeserana zvemagariro
Neraki, pane nzira dzakawanda dzekuita zvimwe kutengesa online, mazhinji acho anogona kuitwa ipapo ipapo. Mamwe emazano aya anotarisa pane mamwe marongero aunogona kuita, asi mamwe akajairika. Mune ino posvo, isu tinokurukura akati wandei marongero akadaro, saka kunyangwe iwe uri kutengesa zvinhu zvepanyama kana kuita bhizinesi-rakavakirwa bhizinesi.
Iva akatendeseka mukopi yako yekutengesa. Izvi zvingaite senge zvinorwadza pachena, asi zvinondishamisa kuti mangani masayiti anonyora macheki ayo zvigadzirwa zvaasingakwanise kuwana mari. Kutendeseka mukuteedzera hakukoshe chete kune rako bhizinesi mukurumbira, asi zvakare kunokurudzira uye kukurudzira kuvimba muchako chako. Usaite zvirevo zvausingakwanise kuratidza uye usashandise hyperbole zvishoma - vatengi vemazuva ano vanofungisisa kune zvisina maturo zvekushambadzira, saka iva akatendeseka, akananga uye unowanikwa mune yako ese kopi kopi, kubva kune rako rekumba peji kune ako email makwikwi.
Iyi nheyo inoshandawo kune maitiro aunozviisa pachako sekambani. Wakambosangana nesaiti iri pachena inotungamirwa nemunhu mumwe kana vaviri, asi iine kopi iyo ingangokodzera kambani yemarudzi akawanda? Maitiro aya haangoite iwe kuti utarise kunge hupenzi, zvakare zvinokanganisa kuvimbika kwe brand yako. Kana iwe uri bhizinesi diki, idada naro uye taura chokwadi nezvazvo - vatengi vazhinji vanoenda kumabhizinesi madiki chaizvo nekuda kwebasa rakasarudzika uye rebasa ravanogona kupa. Usaedze kuva chimwe chinhu chausiri.
1 Tora zvimwe kushambadza
2 Ipa zvipupuriro zvevatengi
3 Gadzira pfungwa yekukurumidzira
4 Ipa mashoma sarudzo
5 Target vateereri vakafanana paFacebook
6 Bvisa mapeji ako ekumhara
7 Edza maGmail Ads
8 Ipa zvese zvaunogona mahara
Tora zvimwe kushambadza
Kana iwe ukatengesa zvinhu pamhepo, kushambadzira kwekuwedzera hakusi nyore feat - ino ficha (inowanikwa mune ese AdWords neBing) inokutendera iwe kuti uite shambadziro yako iwedzere nenzvimbo zhinji dzekukiya. Uye hazvitore chinhu chimwezve! Uye wedzera iyo yekudzvanya-kuburikidza chiyero cheshambadziro yako! Zvinoshamisa zvechokwadi?
Wedzera Kutengesa Kwepamhepo Uchishandisa Ad Kuwedzeredza
Mumuenzaniso uri pamusoro, zvinongedzo ku "Masikati eVarume" uye "Vakadzi veMagirazi echikadzi" zvinopa vanhu vanotarisa kuti vatenge imwe nyowani yeRay-Ban dzimwe nzvimbo mbiri dzekubaya. Izvi zvinoponesa tarisiro nhanho uye zvinoita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuti vawane chaizvo zvavanoda (saka vanoenda kune yako saiti panzvimbo yemakwikwi).
Ipa zvipupuriro zvevatengi
Munharaunda yanhasi yemagariro enhau, mhinduro yemutengi haina kumbonyanya kukosha. Neraki, izvi zvinoreva kuti vatengi vako vakagutsikana vanokwanisa kukupa imwe yezvombo zvakakosha kwazvo mune yavo zvombo: zvipupuriro.
Wedzera Kutengesa Kwepamhepo Kunosanganisira Hutengi hweVatengi
Mauto evatengi vakagutsikana ane simba zvakanyanya kupfuura kunyange rakanakisa rekutengesa kopi, saka ive shuwa yekuisa zvipupuriro uye ongororo kubva kune vako brand evhangeri vanotaura nezve kutyisa kwako. Izvi zvinogona kuoneka pamapeji ako echigadzirwa, mapeji ekumhara, peji remitengo, kunyangwe peji rako rekumba. Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa chinyorwa changu pane simba revatengi zvipupuriro.
Saizvozvowo, kuiswa kwemasaini ekuvimba kunogona kuva nzira huru yekuwedzera kutengesa kwepamhepo, sezvo ichigadzira maonero akanaka ezita rako muchiratidzo chetariro uye inogona kukunda kusahadzika. Kana bhizinesi rako riine chero humbowo hwehunyanzvi (kunyangwe chimwe chinhu seyakajairwa sechitupa kubva kuOffice yeGood Bhizinesi Maitiro kana nhengo mukamuri yako yemuno yekutengesa), isa izvi zviratidzo zvekuvimba kumberi nepakati pesaiti yako. Kana uine runyorwa runonakidza rwevatengi vakagutsikana, ita shuwa kuti vangangove vatengi vako vazive nezvazvo.
Gadzira pfungwa yekukurumidzira
Izvo zvakakosha kuti uve akatendeseka uye kujekesa nezve zvauri uye zvaunoita, asi hapana mirau inokutadzisa iwe kuumba pfungwa yekukurumidzira kunyengetedza vangangove vatengi kutenga kubva kwauri izvozvi.
Wedzera kutengesa kwepamhepo nekugadzira pfungwa yekukurumidzira
Vatengi vazhinji vanopindura zvakanaka kune zvinokurudzira izvo zvinoumba pfungwa yekukurumidzira, kubva kune yakakosha kupihwa iyo nguva ipfupi, kune mashoma-zvigadzirwa zvigadzirwa. Kunyangwe nzira dzekuita izvi dzakasiyana sezvigadzirwa zvinogona kutengwa pamhepo, mamwe marongero anogona kushanda kupfuura mamwe. Semuenzaniso, kana iwe usinga (kana usingakwanise) kugadzira yakatemwa-edition chigadzirwa kukwezva tarisiro, pamwe unogona kupa mari kukurudzira kune vatengi vanozvipira kutenga kutenga ipapo ipapo, senge kutumira kwemahara kana kudzikisira.
Wedzera kutengesa kwepamhepo uchishandisa vashambadzi tsika. Chero ipi nzira yaunofunga kuenda nezvazvo, kugadzira pfungwa yekukurumidzira inzira huru yekuwedzera kutengesa kwepamhepo.
Ipa garandi yekudzosera mari
Kazhinji nguva, chimwe chezvinhu zvine simba musarudzo yemutengi chekuti asatenge chimwe chinhu kupokana nenjodzi - chishuwo chekudzivirira kurasikirwa kurasikirwa. Kazhinji yenguva, iyi inoonekwa njodzi ndeyemari. Nei mumwe munhu achifanira kutenga zvigadzirwa zvako? Ko kana zvikasashanda, kana mutengi asingavade? Kunyangwe kutenga kudiki kunogona kutakura njodzi ye "kuzvidemba kwemutengi," saka kuramba uku kunofanirwa kukundwa kumberi nekupa garandi yekudzorera mari-yekudzosera mari.
Iyo yakawanda njodzi yaunotora kubva pasarudzo yetarisiro, zvakanyanya mukana wekutenga kubva kwauri, saka bvisa chero chinhu chingatadzise tarisiro pakutenga.
Ipa mashoma sarudzo
Kune makambani mazhinji, pfungwa iyi haifungiki. Chokwadi kupa zvimwe zvigadzirwa inzira yakanaka yekuwedzera kutengesa! Zvakanaka, kwete hazvo. Muchokwadi, mune dzakawanda zviitiko, hukuru hwakakura hwesarudzo hunogona kutungamira mukusagadzikana pane chikamu chetarisiro, izvo zvinozoguma nekutengesa kwakarasika.
Kana iwe uine zvigadzirwa zvakasiyana siyana, funga kuronga yako saiti kana mapeji echigadzirwa nenzira inopa vashanyi sarudzo shoma sezvinobvira. Izvi zvinoderedza mukana wekuti mushanyi akurirwe nezvizhinji zvezvigadzirwa zvakasiyana. Izvi zvinogona kuzadzikiswa nekuronga zvigadzirwa zvako muzvikamu zvakapfupika uye zvakapfupika (bhenefiti yakawedzerwa ndeyekuti zvinoita kuti zvive nyore kune vashanyi kuti vawane chaizvo zvavari kutsvaga), kana iwe unogona kuisa kukoshesa kwakanyanya pazvishoma zvigadzirwa zvemunhu. Chero zvazvingaitika, yeuka kuti paunowedzera sarudzo dzaunopa, mukana wekuti mutengi aende kumwe kunhu.
Target vateereri vakafanana paFacebook
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuwedzera kutengesa pamhepo ndeye kushandisa iyo data iwe yauinayo nezve vako variko vatengi kuwana vanhu vakaita saivo. Facebook inokutendera kuti uite izvi nekutarisa vateereri vakafanana.
Wedzera kutengesa kwepamhepo nekunangisa vateereri vakafanana paFacebook. Vakataridzika vateereri paFacebook ndevashandisi veFacebook vanogovana hunhu uye hunhu nevatengi mudhatabhesi yako. Iwe unoisa yako data kuFacebook, iyo inoenderana neyako data (uye ruzivo kubva kune wechitatu-bato data brokers) kuti ugadzire machisi anoenderana nematanho aunodudzira. Iwe unogona zvakare kushandisa ekuteedzera mapikisheni uye app kuisa data kuti ikubatsire iwe kugadzira vakataridzika vateereri. Iyi inzira huru yekuisa yako yazvino data yemutengi kuti ikushandire iwe, ichinyatso kubvumidza iwe kuti uwedzere zvakanyanya kusvika kwako nekuita kushoma uye shandisa zvakanyanya zvakanangwa kushambadzira kukwezva vashandisi veFacebook vakafanana chaizvo nevatengi vako .azvino.
Kuwedzera kutengesa kwepamhepo kunopesana nekutengesa ngoro yekusiya. Zvakafanana nenongedzo iri pamusoro nezve ruzivo rwevashandisi, kudzikisa kukakavara mune yekutarisa maitiro kunogona kukanganisa zvisingaite pamitengo yako yekutendeuka. Nenzira imwechete iyo inofanira kuita kuti zvive nyore sezvinobvira kuti vashanyi vashandise uye vafambe saiti yako, iwe unofanirwa kuita kuti zvive nyore kwavari kutenga izvo zvaunotengesa.
Bvisa chero matanho asina basa mukutenga kwako kunogona kudzikisira tarisiro kubva pakutendeuka. Darika minda isingakoshi pamafomu. Usavape nguva uye uite kuti vatange patsva kubva pakutanga. Heano mamwezve matipi ekuti ungarwa sei nekutenga ngoro yekusiya.
Wedzera kutengesa kwepamhepo kubvuma mhando dzakasiyana dzekubhadhara
Vatengi vane sarudzo yakawanda kupfuura nakare kose kuti vanobhadhara sei zvinhu nemasevhisi, uye havazi vese vanofarira kushandisa American Express Nekupa dzimwe sarudzo dzekubhadhara, kusanganisira masevhisi matsva ari kuramba achizivikanwa pane nhare, uri kuita kuti zvive nyore kune vangangove vatengi kuti vakupe mari yavo. Ehezve, zvinogona kuve zvinonetsa kukwidziridza yako saiti (uye nzira yekutarisa, sezvatakakurukura pamusoro) kuisa zvese izvi sarudzo, asi kuita kudaro inzira huru yekuwedzera kutengesa kwepamhepo, kunyanya kana yako saiti ine inorema mobile traffic ..
Chengetedza mari yezvigadzirwa zvemhando
Pane humbowo hunogombedzera hwekuti chikafu chakapihwa zvakanaka chinonaka kupfuura chikafu chakayanikwa zvakashoshoma. Tichifunga nezve kukosha kwechitarisiko maringe nemaonero atinoita zvinhu (kusanganisira vamwe vanhu), zvinomira kufunga kuti kudyara mune yemhando chigadzirwa kutora mafoto kune mhedzisiro yakafanana kune vako saiti vashanyi.
Bvisa mapeji ako ekumhara
Isu tambotaura zano iri zvisati zvaitika, uye zvinowanzo simudza zvinopfuura mashoma tsiye, kutaura zvishoma. Nekudaro, isu hatikurudzire kubvisa mapeji ekumhara zvisina basa, asi panzvimbo pezvo kugadzirisa mashambadziro ako epamhepo kuti aenderane nenhamba yevatengi vanonyatsotarisa pawebhu nekutenga online.
Wedzera kutengesa kwepamhepo uchishandisa Facebook 'tinya kufona' kushambadza. Kudana-chete mushandirapamwe paFacebook neAdWords muenzaniso wakanaka wemamiriro ezvinhu apo kubvisa peji retsika rinomira zvine musoro. Vazhinji vanhu havadi kushandisa maminetsi akati wandei vachivhura mapeji pafoni yavo, vanongoda kutaurirana nebhizinesi rako.
Wedzera online kutengesa AdWords kufona-chete mushandirapamwe. Nekushandisa yekufona-chete kushambadzira, urikuita kuti zvive nyore kune vangangove vatengi kubata bhizinesi rako, kubvisa zvachose rimwe rematanho akaomesesa echinyakare online yekutengesa fanera, uye inogona kuwedzera vhoriyamu yekufona kubhizinesi rako, chimwe che sosi yakakosha yekutaurirana kumakambani mazhinji. Vanhu vanokufonera vari kukumbira kuti uvatengese chimwe chinhu.
Edza maGmail Ads
Mushure memakore ekupinda nekubuda mubeta, kushambadza kweGmail kuri FINALLY kunowanikwa kune wese munhu. Iyi inzira inonakidza yekusvika tarisiro uye kuwedzera kutengesa.
Wedzera Kutengesa Kwepamhepo Uchishandisa Gmail Ads. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga Imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekushandisa kushambadzira kweGmail ndeyekutarisa makwikwi emakwikwi ako. Vanhu vari mumusika wezvinhu zvevanokwikwidza vako vari kugamuchira maemail kubva kune vavanokwikwidza vachitaura nezvezita rako rezviratidzo izvozvi. Nekunyora pasi iwo mamwe mazwi, iwe unogona kuzviratidza mumaboxbox avo uye netariro kuti vachachinja pfungwa.
Chengetedza kuenderana kwemeseji pamishandirapamwe uye yako saiti
Wakambodzvanya pane yePPC kushambadza iyo yakabata ziso rako, kungoendeswa kune irrelevant landing peji (yakaipa) kana kune iyo huru peji resaiti (yakaipa)? Wakaguma watenga zvawaitsvaga kubva kune saiti? Zvichida kwete.
Wedzera online yekutengesa meseji inoenderana. Air Canada inoratidza kushambadzira, uye inoenderana nayo.
Wedzera Pamhepo Kutengesa Meseji Inomhara Peji Peji
Kana mushandisi akabaya pane shambadziro yechimwe chigadzirwa kana sevhisi, iro peji ravanoenda rinofanirwa kunge riri nezve icho chigadzirwa kana sevhisi, kwete inoenderana chikamu, kana chakakosha kupihwa chimwe chigadzirwa, asi icho chaicho chigadzirwa. Ita shuwa kuti meseji yako inokodzera kune ese akabhadharwa macampaign eruzhinji uye mapeji ane hukama navo, kuti kushambadza kushambadza kunyatso shanduka kuve kutengesa.
Pindura mibvunzo yese uye gadzirisa zvese zvinopesana mukopi yako
Imwe yemisungo ine njodzi iwe yaunogona kuwira mairi uchiedza kutengesa online kuita fungidziro nezve yako vangangove vatengi ruzivo rwechigadzirwa chako, sevhisi, kana kunyange musika. Makambani mazhinji anotenda zvisirizvo kuti vatengi vavo vanoziva zvakawanda pamusoro pezvavanenge vachitengesa kupfuura zvavanoita chaizvo, zvichitungamira kumibvunzo isina kupindurwa kana kupokana zvisina kutaurwa, izvo zvinogona kukuvadza kutengesa.
Funga nezvemibvunzo yese inoitika kwauri nezve chigadzirwa chako, uye upindure mukopi yako pamapeji ako echigadzirwa. Zvimwechetezvo, funga nezvese zvingangoita zvinopesana zvingangotarisirwa nemutengi pamusoro pechipo chako, uye nekuzvikunda uzvikunde mukopi yako. Izvi zvingaratidzika sezvisingagone, asi rangarira kuti hausi kubhidha tarisiro neruzivo rusina basa, urikupa izvo chaizvo zvavanoda kuti vatore danho rine ruzivo. Maitiro aya zvakare akakosha kurovedza muviri ekunyora yakasimba, yakajeka, uye ipfupi kopi. Kana iwe uine hanya kuti pane yakawandisa kopi, iwe unogona kugara uchizvicheka. Ingo chengetedza kutarisisa kumutengi uye kuti anovabatsira sei, kwete nei kambani yako ichinakidza.
Ipa zvese zvaunogona mahara
Vanhu vanoda zvinhu zvemahara, uye paunowedzera kupa, ivo vanonyanya kugona vatengi vanozoona iwe uye chako chiratidzo, izvo zvinogona kukonzeresa kutengesa kwakawanda kwepamhepo. Wedzera kutengesa kwepamhepo nekupa zvakasununguka zvinhu. Zvinoshamisa!
Tarisa pane zvaunopa izvozvi. Unogona here kupa chimwe chinhu mahara? Kana iwe uri mubhizinesi re software sesu, zviri nyore kupa mahara, kwete-zvechisungo miedzo yesoftware yako. Kunyangwe usiri, iwe unogona kupa masampuli, kuyedza nhengo, mbiri-kune-imwe zvinopihwa, uye zvimwe zvinopa mubairo-zvinokurudzirwa. Kupa zvinhu zvemahara haisi nzira huru chete yekuvandudza kuona kwevanhu bhizinesi rako, zvakare inzira huru yekuvazivisa kune vako-zvaunazvo uye kuvanyengerera kuti vatenge zvimwe.
Gadzira uye gadzirisa zvakadzama zvekutenga mavara
Ndiri kuenda kumberi uye ndofungidzira kuti wave kutogadzira mavara ekushopa (nekuti kana ukasadaro, uri mudambudziko chairo), asi ini ndiri kuzokudenha iwe kuti ugadzire zvakanyatsotsanangurwa vatengesi kupfuura mune yapfuura. Ichokwadi kuti ichakubatsira iwe mumitambo yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Maitiro mukutengesa kwepamhepo